ပန်းမာရ် ပြပွဲ (VI) (Fine Arts Park Area)(International Pavilions) Taipei International Flora Expo 美術公園 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပန်းမာရ် ပြပွဲ (VI) (Fine Arts Park Area)(International Pavilions) Taipei International Flora Expo 美術公園
ပန်းမာရ် ပြပွဲ (VI) (Fine Arts Park Area)(International Pavilions) Taipei International Flora Expo 美術公園
Posted by zoe on Feb 20, 2011 in Arts & Humanities, Cultures, Events/Fundraise, History, News, Photography, Society & Lifestyle, Travel, World News |7comments
Fine Arts Park Area International Pavilions Pavilion of Aroma of Flowers Taipei Fine Arts Museum Taipei International Flora Expo
ဒီတခါတော့ (Fine Arts Park Area) ဧရီယာ ဇုံ ကိုကြည့်ကြမယ် ။ ဒီ ဇုံမှာ အ ပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ က ပြခမ်း မ (Global Garden)တွေ ရှိ တယ် ။ နိုင်ငံ ပေါင်း ၃၄ နိုင် ငံ က ပြခမ်း တွေ ရှိ တယ် ။ ထိုင်ဝမ် နဲ့ အစိုးရ နဲ့ diplomatic relationship ရှိတဲ့တိုင်းပြည် စာရင်း အရ နည်း ပါတယ် ။ တရုပ်ပြည်မကကန့်ကွက်လို့ ။ လက် တင် အမေရိက က တိုင်းပြည်အတော် များများ တရုပ် ကိုပြောင်း ဆက်သွယ် ကြတယ် ။ Foreign Affairs အရ နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု ပေါ့ ။
ဒီ ဧရီယာ ဇုံ မှာ
2Pavilion of Aroma of Flowers
3Taipei Story House
4Taipei Fine Arts Museum
ဆိုပြီး ခွဲထားပါ တယ် ။
ဧရီယာ ဇုံ တ ခု မှာ ပြ ခမ်း မ ကြီး ပျမ်းမျှ ၄ခု လောက် ရှိ ပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တဲ့ ပြ ခမ်း ဆို ရင် အချိန်ယူ တန်းစီပြီး ကြည့်ရ ပါ တယ် ။ ဒါကြောင့် အား လုံး နှန့်စပ် အောင် တ ခေါက်ထဲ နဲ့မ ရောက် နိုင် ခဲ့ ဘူး ။ နောက် ထပ် သွား မှ ထပ် ဖြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒီ ပြခမ်း မ မှာ လူ တန်းရှည် စောင့် ဝင်ရမှာ မို့ အချိန် မ ပေး နိုင် လို့ အပြင်က ပဲ ဓာတ် ပုံရိုက် ခဲ့တယ် ။
EXPO Hall is 3043.13 ㎡ in size and featuresaunique butterfly and chrysalis architectural design created with recyclable steel. The themes of “dancing blossoms, fluttering butterflies, and green living” are omnipresent throughout the hall, and the transparent skylight panels brighten the interior with natural illumination. Designed to maximize natural air circulation, the semi-open structure can operate without air conditioning facilities. The hall has an estimated capacity of 1,200 seats with clear, optimal views of the stage.
ဒါကတော့ အောက်ထပ် အရောင်းခမ်း အပေါ်ထပ် စားသောက် ဆိုင် နားနေ ခမ်း Pavilion
The modern, original architectural design of the Pavilion of Aroma of Flowers is reminiscent of six overlapping petals. Rooms are separated with bamboo fiber dividers modeled after rattan chairs from days gone by. The pavilion is the only Taipei International Flora Exposition exhibition hall that has the event’s mascots, flower fairies, as its main theme. Inside, visitors can find thousands of charming flower fairy products for sale at the exposition’s flagship souvenir store.
Apart from official souvenirs, the store also featuresaspecial DIY souvenir section for those fond of arts and crafts. A semi-open food court with beautiful views of the colorful, expansive “Global Garden Area” is located on the second floor. In the evening, visitors are treated to dazzling views of the brilliant Pavilion of New Fashion. The Pavilion of Aroma of Flowers’ beautiful scenic views should not be missed!
အ ပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ က ပြခမ်း မ ကိုယ်တိုင်ရိုက် ဓာတ် ပုံ တွေ ပို့စ တင် လိုက် ပါ တယ် ။
မ လေး ရှားနိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ဖီ လစ် ပိုင် နိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ီဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံ ပြ ခန်း
ဟဝိုင် ရီ ပြခမ်း
ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ဂရိ နိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ဂရိ နိုင်ငံ ပြ ခန်း
ကိုရီးယား နိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ကိုရီးယား နိုင်ငံ ပြ ခန်း
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ ပြ ခမ်း
ဗီရက်နမ် နိုင်ငံ ပြ ခန်း
ထိုင်း နိုင်ငံ ပြခမ်း
ဘူ တန် နိုင်ငံ ပြခမ်း
ဘူတန် နိုင်ငံ ပြ ခန်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု ပြခမ်း
အင်ဒီးရာ်းနိုင်ငံ ပြခမ်း
အိုမန် နိုင်ငံ ပြခမ်း
ဖျော်ဖြေ ရေး အစီ အစဉ် stage-show
ဂျပန် အင်ဂလန် ပြင်သစ် နိုင်ငံပြခမ်း တွေ missဖြစ် သွားတယ် ။ နောက် သွားတော့ edit ထပ် လုပ် ပြီး ဖြည့် မယ် ။
လှပါတယ် ပန်းတွေ အားကြိးဘဲနော်။ ဘယ်လို စိုက်လဲ မသိဘူး အိမ်က ပန်းတွေက အမြစ်တွေဆို ရေညှိတွေ တက်နေပြီ။ အဲဒီက ပန်းပင် အမြစ်တွေက တော်တော် သန့်တယ်။ ဖွေးနေတာဘဲ။
ထိုင်းက သစ်ခွတွေကတော့တော်တော်လှတယ် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်လဲတော့ပြောတတ်ဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ကြိုးစားပေးထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေအတွက်
နိုင်သ လောက် ကြိုးစား ပြီး တင်သွား ပါ မယ် ။
ထိုင်းမှာပြပွဲ လုပ်တုံးက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေရှိတယ်။ နောက်မှတင်လိုက်အုံးမယ်.
့မျှော် နေ တယ် နော် ။
ပန်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် .. ဘုရင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့… ဟော်လန်က ပန်းခင်းကြီးကို ညာတာပါတေး လုပ်ထားတယ်နော..။
သူ့တို့လည်း မတွေ့မိဖူး..။ လာပြကြရဲ့လား..။
ဂျပန် ပြခမ်း miss ဖြစ်သွားတာ ။ miss ဖြစ်သွားတဲ့ ပြ ခမ်း အ ချို့ နဲ့out-door ပန်း ပုံ ထပ်တင်ပါ မယ် ။